China SPC Floor SM-021 Ukwakha kanye nefektri | I-Aolong
Njengamanje, ubukhulu be-spc abukho i-4mm ne-6mm imininingwane emibili ejwayelekile, ngoba izwe alinazo izinto ezithile ezijwayelekile ngosayizi wephansi ngakho-ke usayizi wefulethi ngalinye laphansi wehlukile. Iphansi le-spc lincane, kepha isisindo siphezulu futhi ukumelana nokugqoka kuphezulu. Njengamanje, izindinganiso zaphansi zekhwalithi engcono kakhulu noma zokuthekelisa, izinto zomdabu ezimhlophe, izinto ezinokudlulisa ukukhanya okuphezulu. Ubuso buyamelana nezinsimbi ezisindayo kanye ne-formaldehyde. Esesibili iphansi le-SPC, elihlanganiswe ngokulingana nezinto ezisetshenziswe kabusha. Amanye asafinyelela ngaphansi ngaphansi okumhlophe kodwa awashintshi. Kulula ukukhipha. Kukhona nepuleti eliluhlaza elisezingeni eliphansi. Lokhu kusetshenziswa ikakhulukazi ekhaya. Imikhiqizo ayidingi ukwethulwa kakhulu, ongayisebenzisa ukubeka ezitolo ezinkulu ngegebe empeleni kuyisikwele amadola ambalwa enkinga ukubona okuthandwa yiwo wonke umuntu okuthengwayo.
Ukwehliswa kwamatshe kube nomthelela omkhulu empilweni yomuntu kusukela ngosuku azalwa ngalo. Ngokuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe amapulasitiki asetshenziswa kakhulu empilweni yabantu yansuku zonke, enkulu kusiphekepheke esincane esetafuleni labantu isebenzisa imikhiqizo yepulasitiki, imikhiqizo yepulasitiki embonini yezinto zokwakha isetshenziswa kabanzi. Pvc plastic njengoba impahla esemqoka phansi kancane kancane umusa abathengi, okuwukuthi - itshe-plastic flooring.
Ngokugunyazwa kokuhlolwa, i-flooring yamatshe ine-acid enamandla ne-alkali corrosion resistance, ingamelana nokuhlolwa kwendawo enokhahlo, efanelekile kakhulu ukusetshenziswa ezibhedlela, emalabhorethri, ezikhungweni zocwaningo nakwezinye izindawo.
Inhloso yokuhlanza nokunakekela i-SPC phansi
1. Thuthukisa ukubukeka: susa ngesikhathi ukungcola okukhiqizwa ekusetshenzisweni kwansuku zonke, yenza iphansi le-SPC libonise ngokuphelele ukubukeka kwalo okungavamile nokucwebezela kwemvelo.
2. Vikela isitezi: vikela iphansi le-SPC kumakhemikhali engozi, amamaki okuphela kukagwayi, izicathulo, uwoyela namanzi, unciphise izinga lokugqoka lobuso, dlala ngokugcwele ekuqineni kwephansi uqobo, ukuze unwebise impilo yenkonzo phansi.
3. Ukunakekelwa okulula: ngenxa yesakhiwo esihlangene sendawo kanye nokuphathwa okukhethekile kwesitezi se-SPC, kufanele kunakwe ekuhlanzeni nasekulondolozeni nsuku zonke, okungenza iphansi libe lula ukunakekelwa nokwelula impilo yenkonzo yalo.
Langaphambilini SPC Phansi SM-020
Olandelayo: SPC Phansi SM-025